ကြီးစွာသောနယူးဂျာစီဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မြောက် VS တောင် VS ဗဟို - နှုန်းထားများ
ကြီးစွာသောနယူးဂျာစီဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မြောက် vs တောင် vs ဗဟို
Yup Scarlet Knights, ကျွန်တော်တို့အဲဒီကိုသွားခဲ့တယ်။ subs မှ hoagies နှင့် Taylor Ham တို့မှ Pork Roll သို့ North, South နှင့်နာမည်ကျော်ဗဟိုဂျာစီဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။
I-95 အရုဏ်တက်ချိန် မှစ၍ နယူးဂျာစီယန်လူမျိုးအားလုံးအတွက်ဤမေးခွန်းသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ဖူးသည်။ သင်သည်တောင်ဂျာစီ၊ မြောက်ဂျာဆီမှလော၊ နယူးဂျာစီရှိထုတ်ဝေမှုတိုင်းနီးပါး၌ဤငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုများအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ဒါကြောင့်သဘာဝက The Tab ဟာငါတို့ချစ်သောနေအိမ်ဂျာစီပြည်နယ်၏နယ်နိမိတ်များကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်သည့်အစဉ်အမြဲအဆုံးသတ်သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဘယ်လိုဒီ meme မှလာခဲ့တာလဲ
ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အခါနယူးဂျာစီမြေပုံကိုကြည့်ပြီးမြောက်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုတန်းတူအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါ။ သို့သော်ဤမြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းနှင့်ဗဟိုဂျာစီဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းကိုပထ ၀ ီနယ်မြေတစ်ခုတည်းဖြင့်သာဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဤဌာနခွဲကိုကျွန်ုပ်တို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်များနေထိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးဝယ်သည့်နေရာတွင်စကားပြောခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အမြစ်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခုဆိုရင်အမေရိကားမှာလူတိုင်းကငါတို့နယူးဂျာစီယန်လူမျိုးတွေဟာငါတို့ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့မွေးရပ်မြေပြည်နယ်ကိုဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာကိုသိကြတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်၏အဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားအသင်းများရှိခြင်းမှသည်ငွေများ ၀ ယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအချက်အချာကျသည့်အတွေ့အကြုံများရရှိခြင်းအထိ၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်များသည်သူတို့၏ပြည်နယ်စားပွဲဝိုင်းပေါ်ပေါက်စေသည့်အရာများအတွက်ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါ။
နယူးဂျာစီပြည်နယ်သားအားလုံးသည်လင်းနို့ပေါ်မှလူတစ် ဦး သည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်၏မည်သည့်ဒေသသည် hoagie နှင့်ဝက်သားလိပ်စာသို့မဟုတ် sub နှင့် Taylor Ham ဟူသောစကားလုံးများကိုသာကြားရခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်းနယူးဂျာစီယန်၏အရိပ်အမြွက်ပြောသောနိမိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် hoagie နှင့်ဝက်သားလိပ်သည်တောင်ဂျာစီနှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအလိုအလျောက်ဆက်နွယ်သည် - ထိုအချက်သည်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တေလာဟမ်နှင့်ခွဲများကိုမှာယူသောအခါသင်သည်နယူးဂျာစီယန်မြောက်ပိုင်းအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ တောင်းပန်ပါတယ်
ဒီဟာ hoagie ဒါမှမဟုတ်ခွဲတစ်ခုလား
တေလာဝက်ပေါင်ခြောက်သို့မဟုတ်ဝက်သားလိပ်? သို့မဟုတ်တေလာဝက်သား Roll?
အကောင့်ထဲသို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Wawa နှင့် QuickChek အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ
Wawa သည်အံ့သြစရာကောင်းသည့်အရာအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်းသော grail ဖြစ်သည်။ နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိကံကောင်းသောနေထိုင်သူများသာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ QuickCheck နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သည့်နည်းနှင့်ပုံသဏ္,ာန်နှင့်ပုံစံကိုအဝေးမှပင်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ Wawa ကိုချီးမွမ်းခြင်းသည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်၏လက္ခဏာသက်သက်ဖြစ်သည်ကိုမယုံပါနှင့်? ကောင်းပြီနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပါ ဦး ။ ဝဝကသူတို့ရဲ့အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုဘာခေါ်တာလဲ။ ဒါက hoagie ညာဘက်ပဲ!
ထို့ကြောင့်နယူးဂျာစီပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ကံမကောင်းသူအားလုံးသည်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သော QuickChek အတွက်အခြေချရမည်။ တောင်းပန်ပါတယ်
သငျသညျအဘို့အဘို့အ root လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့အားကစားအသင်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသများအကြီးမြတ်ဆုံးကွဲပြားခြင်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်တစ်ခုခုပါပဲ။ အမျိုးသားလိဂ်, နယူးဂျာစီပြည်နယ် Devils အတွက်တစ် ဦး တည်းသာအဓိကအားကစားအသင်းရှိခြင်း, အဂျာစီဒေသများအကြားပတျဝနျးကငျြပြည်နယ်အသင်းများ၏ဌာနခွဲကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုနယူးယောက်မြို့ မှလွဲ၍ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ သိသာထင်ရှားသည့်ရွေးချယ်မှုအတွက်နယူးယောက်မြို့နှင့်နီးစပ်သောအကွာအဝေးအတွင်းရှိသူအားလုံး၊ နယူးယောက်အသင်းများ (သိပ္ပံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Giants, Jets, Yankees, Mets နှင့် Rangers) ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သူများက Philadelphia မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေထိုင်ခြင်းသည် Flyers, Eagles နှင့် Phillies တို့၏ရင်းမြစ်ကိုနေထိုင်ကြသည်။ ဤပရိသတ်များသည်မည်သည့်အားကစားပွဲ၌မဆိုအတူတကွကောင်းမွန်စွာမရောနှောခြင်းကြောင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဂျာစီ၏နယ်နိမိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောကွဲပြားခြင်းအချက်ဖြစ်သည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ဂျာစီလူမျိုးများအားနယူးဂျာစီပြည်နယ်အခြေစိုက်နယ်နိမိတ်အတွင်းအမြဲတမ်းနေထိုင်မည့်အခန်းကဏ္ and များနှင့်ဒေသများသို့အမှတ်တရဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်နယူးဂျာစီယန်များသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းသူတို့နေထိုင်သောဒေသများအတွက်အလွန်မာနထောင်လွှားပြီးအခြားဒေသများနှင့်ခွဲခြားရန်သေချာသည်။
သို့သော်ဤကတိသစ္စာသည်ဗဟိုဂျာစီပြည်နယ်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်း၌တတိယနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဒေသတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နယူးဂျာစီပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးသည်အားလုံးမဟုတ်ပါကအလယ်ပိုင်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်များသည်သူတို့၏အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်တည်မှုကိုမှန်ကန်စွာကိုင်စွဲထားကြသည်။ အချို့သောခြွင်းချက်များမှ လွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်၏ဤအလယ်ပိုင်းဒေသသည်ဂျာစီ၏လူ ဦး ရေ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုသောမွန်မောက်၊ မစ်ဒလက်စ်၊ မာဒါနှင့်တခါတရံသမုဒ္ဒရာခုိုင်များပါ ၀ င်သည်။ အဓိကအားဖြင့်တောင်ပိုင်းဂျာစီလူမျိုးများ၏လူနေမှုပုံစံကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းအများအပြားသည်နယူးဂျာစီပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် (အထူးသဖြင့်အားကစားအသင်းများ) နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် (အထူးသဖြင့်အားကစားအသင်းများ) သည်ဗဟိုဂျာစီရှိလျှင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအချေအတင်ပြောဆိုမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်တစ် ဦး Benny သို့မဟုတ် Piney ဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်ရုံတစ်နေရာရာအကြား၌ရှိမရှိ, အမြဲတမ်းဂျာစီကနေဖြစ်ဂုဏ်ယူဖြစ် - အိမ်မှာကဲ့သို့နေရာမရှိသောကွောငျ့။ ဒီတော့ Scarlet Knights, ခင်ဗျားတို့ကိုအခုမေးမှာပါ။ ဗဟိုဂျာစီရှိသလား။ နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်ဒေသကိုသင်ပိုင်တယ်လို့ထင်သလဲ။